परिचय नखुलेको दुर्घटनामा परि ज्यान गएको ब्यक्तिको सनाखत, देवताल बासी रहेको पहिचान - BSN.COM.NP
By News Desk	 Last updated Aug 10, 2020
अनिल पान्डेय, कलैया, बारा ।
पश्चिम हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत बाराको पचरौता नगरपालिका वडा नं. ८ ढोडा पुलमा सोमवार बिहान करीब ६ बजे दुर्घटना भएको थियो। भएको मोटरसाईकल दुर्घटनामा एक युवकको ज्यान गएको थियो। लंगडा चोकबाट पश्चिम तर्फ जादै गरेको ना ३४ प ३४०० नम्बरको एस्पेलेण्डर मोटरसाईकल आफै अनियन्त्रित भई भएको दुर्घटनामा परी देवताल गाउँपालिका ७ निवासी ३१ बर्षिय प्रदिप रामको घटनास्थल मै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता डिएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
तिब्र गतिमा रहेको उक्त मोटरसाईकल आफै अनियन्त्रित भई राजमार्गमा रहेको ढोडा पुल (कल्भर्ट) को भित्तामा ठोकिएको थियो । पुलमा ठोकिएपछि युवक मोटरसाईकल सहित डोरा खोलामा खसेका थिए ।
मोटरसाईकलको अगाडीको भाग पुर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको र युवकको घटना स्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बाराको हुलाकी राजमार्गमा बढ्दै गएको सवारी दुरखटना नियन्त्रण गर्नको लागि ट्राफिक संकेत ठाउँ ठाउँमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । मृतक युवकको शव कलैया अस्पताल पोष्टटमार्टम गरि परिवारको जिम्मा लगाइएको छ ।
रास्ट्रिय बजरंग बलको नाममा पासवानले गरे १५ नं. वडा निर्मलीकरण
This Week: 5579
This Month: 5579